थाहा खबर: रानीपोखरीको नक्सा नै गलत, पानी अड्याउने योजनै छैन
रानीपोखरीको नक्सा नै गलत, पानी अड्याउने योजनै छैन
काठमाडौं : साढे दुई वर्षअघि गएको भूकम्पमा ध्वस्त रानीपोखरीको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको फेला परेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब तीन महिना लगाएर रानीपोखरीको नक्सा ‘ड्रइङ एन्ड डिजाइन’ तयार गरेको थियो। पुरानै नक्साअनुसार काम अघि बढाउने कि नयाँ नक्सा बनाउने विषयमा अन्योल भएपछि रानीपोखरी निर्माण वर्ष दिनदेखि अलपत्र बन्न पुगेको छ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले नक्सामा त्रुटि देखिएपछि निर्माण कार्य अलपत्र बनेको बताए। ‘रानीपोखरीको नक्सा हामीले नै बनाएका हौँ। तर, पछि त्रुटिपूर्ण देखियो। पुरानै नक्साअनुसार काम अघि बढाउने कि नयाँ नक्सा बनाउने विषय अझै टुंगो लागेको छैन, यही कारण निर्माण कार्य रोकिएको हो,’ उनले भने।
महानगरपालिकाका भौतिक पूर्वाधार विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीको नेतृत्वमा रानीपोखरीको नक्सा तयार गरिएको थियो। तयार नक्सा त्रुुटिपूर्ण रहेको तथ्य त्यतिवेला पत्ता लाग्यो, जतिवेला पानी सुकाएर रानीपोखरी पूर्णरूपमा भत्काइसकिएको थियो। महानगरपालिकाका अनुसार इन्जिनियरले रानीपोखरीको आकर्षक नक्सा निर्माण गर्‍यो।
पोखरीवरिपरि मनोरम गार्डेन रहेन भनी नक्सामा उतारियो। पोखरीभित्र म्युजिकल फाउन्टेनसमेत बनाउने भनियो। तर, पोखरीमा पानी अड्याउने विषयतर्फ इन्जिनियरको ध्यान नै गएन। पोखरीमा पानी अड्याउने विषय नै समावेश नभएपछि रानीपोखरीको नक्सामा त्रुटि भेटिएको हो। ‘नक्सा ठीक नभएको पछि मात्रै थाहा भयो। प्राविधिकले पहिले नै यति विषय त सोच्नुपर्ने हो, तर सोचेको देखिएन। गल्ती यहीँ भएको छ,’ उनले भने।
मान्दिर निर्माण पनि सुस्त
महानगरपालिका र पुरातत्व विभागबीच लामो विवादपछि निर्माण सुरु गरिएको रानीपोखरीबीचको बालगोपालेश्वर मन्दिरको निर्माण कार्य पनि ठप्प छ। सो मन्दिर एक करोड ६० लाख रुपैयाँमा पुरातत्व विभागले बनाउने सम्झौता थियो। गत असारमै मन्दिरकोे निर्माण कार्य सुरु गरिए पनि प्रगति भने शून्य छ। विभागले आगामी तिहारसम्म मन्दिर निर्माण कार्य सक्ने भनेको थियो। नक्सामा त्रुटि देखिएकै कारण मन्दिर निर्माणबारे महानगरपालिका र विभागबीच विवाद भएको थियो। मन्दिरको नक्सा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले नै बनाएको थियो।
पोखरीमा पानी अडाउने योजना छैन
महानगरपालिकाले योजनाअनुसार पोखरीभित्रको पानी झिक्यो। पोखरीमा रहेका माछा अन्तै सारियो। पोखरीवरिपरि पर्खाल लगाइयो। पोखरीभित्र पुरानो माटो थियो। माटो हटाउनुपर्ने भयो। महानगरपालिका माटो हटाउनेतर्फ लाग्यो। माटो हटाउँदै जाँदा पिँधमा बालुवा भेटियो। बालुवामा पानी अड्नै सक्दैन। त्यसका लागि पोखरीको पिँधमा टायल राख्नुपर्ने हुन्छ। टायल राख्दा रानीपोखरीको ऐतिहासिक महत्व हराउने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा पोखरीको पानी अडाउने विषयमा नक्सामा केही उल्लेख छैन। पोखरीको पिँधमा टायल राख्ने कि माटो भन्ने विषयमा महानगरपालिका अलमलमा छ। रानीपोखरी निर्माण योजना अलपत्र हुनुको कारण यही हो।
भूकम्पलगत्तै महानगरपालिकाले ०७३ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने गरी रानीपोखरी निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो। यसका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन भयो। डिजाइनअनुसार पोखरीभित्र म्युजिकल फाउन्टेन, अत्याधुनिक बगैँचा, मन्दिर पुनर्निर्माण गर्ने भनियो। तर, पोखरीमा पानी अड्याउने विषयमा भने कसैको ध्यान पुगेन।
स्थानीय र प्रदेशमा जान कर्मचारी अाकर्षित
काठमाडौं : सरकारले अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेसँगै स्थानीय र प्रदेश तहमा जान निजामती कर्मचारीमा आकर्षण बढेको छ। गो...
एक लाख कर्मचारी समायोजन गरिँदै
काठमाडौं : कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लागू भएसँगै निजामती कर्मचारीतर्फका ८९ हजार, स्थानीय तहका १५ हजार र अन्य संगठित संस्थाका दुई हजार ...
लोकसेवाले गर्न सकेन १७ सय पदमा विज्ञापन
काठमाडौं : लोकसेवा आयोगले प्रशासन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य गरी नौवटा सेवासमूहका झण्डै १७ सय पदमा विज्ञापन गर्न नसक्ने भएको छ। तर बुधबार आ...
डीएनए परीक्षण किन प्रहरीकै ल्याबमा ?
काठमाडौं : प्रहरीमाथि विश्वासको संकट छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीले चरम लापरबाही गर्‍यो। ...
काम नथाल्दै थिंक ट्यांकले माग्यो पाँच करोड
काठमाडौं : सरकारद्वारा गठित अनुसन्धान तथा प्रतिष्ठान विकास समिति (थिंक ट्यांक)ले कर्मचारीको तलब र प्रशासनिक खर्चका लागि सरकारसँग पाँच करोड र...